အရေး တော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ကြန့်ကြာ နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ဖြင့် ထောက်ပြလာတဲ့ တိုင်းကျော် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / အရေး တော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ကြန့်ကြာ နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ဖြင့် ထောက်ပြလာတဲ့ တိုင်းကျော်
အရေး တော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ ကြန့်ကြာ နေရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာ ဖြင့် ထောက်ပြလာတဲ့ တိုင်းကျော်
ဟာသလူရွှင်တော် တိုင်းကျော်ကတော့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲများအတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေတွင် စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောထဲမှာ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြည်သူတွေ သိရှိစေဖို့အတွက် လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် ဝေမျှပေးနေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုတွေနဲ့ ခွဲခွာရပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြသူတိုင်းကို အားလုံးက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း တိုင်းကျော် ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွင် အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့ ကြန့်ကြာနေရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ထောက်ပြ ရေးသားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့အနာဂတ်တွေ လုယူ ဖျက်စီးခံလိုက်ရတာတောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတဲ့ လူတစ်စု ကြောင့် အောင်ပွဲက မကြာသင့်ဘဲ ကြာနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်ပေးကြဖို့လိုကြောင်းကိုလည်းအခုလို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
” ကျွန်တော့် အနာဂတ် . ခင်ဗျား အနာဂတ် ကျွန်တော့် မိသားစု အနာဂတ် ….ခင်ဗျား မိသားစု အနာဂတ်….တိုင်းပြည် မှာ ရှိတဲ့ မိသားစုအားလုံးရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဖျက်စီး လုယူ ခံလိုက်ရတာ တောင် တချို့ မသိချင်ယောင်ဆောင် နေကြလို့ ကျွန်တော် တို့ အောင်ပွဲက မကြာသင့်ဘဲ ကြာနေတာ . .တိုင်းကျော် ( ဟား၅ကောင် ) ” ဆိုပြီးရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ် တစ်ချို့ကလည်း လုံးဝသွေးမအေးဘဲ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီဆောင် ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကို comment တွင် ရေးသားထားကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ အခုလိုအခြေအနေဆိုးကနေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေဖို့ ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်ပေးကြဖို့ ပြောကြားရင်း ဒီသတင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
ဟာသလူ႐ႊင္ေတာ္ တိုင္းေက်ာ္ကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပည္သူေတြ သိရွိေစဖို႔အတြက္ လူမႈကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ေဝမွ်ေပးေန တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုေတြနဲ႔ ခြဲခြာရၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကသူတိုင္းကို အားလုံးက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း တိုင္းေက်ာ္ ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္တြင္ အေရးေတာ္ပုံေအာင္ျမင္ဖို႔ ၾကန႔္ၾကာေနရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ေထာက္ျပ ေရးသားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးရဲ႕အနာဂတ္ေတြ လုယူ ဖ်က္စီးခံလိုက္ရတာေတာင္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ လူတစ္စု ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲက မၾကာသင့္ဘဲ ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပါဝင္ေပးၾကဖို႔လိုေၾကာင္းကိုလည္းအခုလို ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
” ကြၽန္ေတာ့္ အနာဂတ္ . ခင္ဗ်ား အနာဂတ္ ကြၽန္ေတာ့္ မိသားစု အနာဂတ္ ….ခင္ဗ်ား မိသားစု အနာဂတ္….တိုင္းျပည္ မွာ ရွိတဲ့ မိသားစုအားလုံးရဲ႕ အနာဂတ္ေတြ ဖ်က္စီး လုယူ ခံလိုက္ရတာ ေတာင္ တခ်ိဳ႕ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကလို႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ေအာင္ပြဲက မၾကာသင့္ဘဲ ၾကာေနတာ . .တိုင္းေက်ာ္ ( ဟား၅ေကာင္ ) ” ဆိုၿပီးေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လုံးဝေသြးမေအးဘဲ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို comment တြင္ ေရးသားထားၾကတာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ အခုလိုအေျခအေနဆိုးကေန အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ ကိုယ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပါဝင္ေပးၾကဖို႔ ေျပာၾကားရင္း ဒီသတင္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါတယ္။
Previous post အရမ်း လန်း တဲ့ ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ပိုစ့်တွေပေးနေ တဲ့ မော်ဒယ် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ VIDEO
Next post ကြွေရက်စရာ ကောင်း လွန်းနေ တဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ အမိုက်စား VIDEO